I-Apple kunye neenkcukacha zayo xa kugqitywa iimveliso | Ndisuka mac
Kwakhona sinokukwazi ukuthetha ngenye yezinto ezibonakalisa iimveliso ze-Apple, ukuyila kwazo kunye nokugqiba. Xa sithetha ngokugqiba iimveliso, asibhekiseli kwimveliso ngokwayo, kodwa kananjalo kwizixhobo zokusebenza banakekela zonke iinkcukacha zokugqibela.
Kule meko ndifuna ukukubonisa inkcukacha endandingakhange ndiyifumanise kude kube namhlanje kwaye yile nto iadaptha yamandla Iinqanawa ezihamba nge-12-intshi iMacBooks.
Ukuhlalutya zombini iadaptha ye-iPad kunye neye-12-intshi iMacBook ndiqaphele ukuba ukugqitywa kwale adaptha yesibini kuguqukile kwaye ngoku ii-Apple ziyekile ngakumbi ekuzigqibeni kwaye zishenxise amalungu omanyano lwesiciko esinye kunye enye yeadaptha.
Ngale ndlela, ngokokubona kwam, bafezekisa izinto ezibaluleke kakhulu, eyokuqala kukuba isixhobo sijongeka ngcono, kubonakala ukuba senziwe kwisiqwenga esinye kwaye umbono ovaliweyo upolishe indawo edibeneyo. Ngale ndlela iadaptha inamanzi ngokupheleleyo. Enye into abayiphumezayo kukuba isixhobo asinakho ukusetyenziswa ngandlela thile, sisenza Ayisiyo imvelaphi yokonakala kwekhompyuter okunje ngeMacBook ngenxa yokuqhathwa ngaphakathi kweadaptha.
Kule mifanekiso iqhotyoshelweyo ungabona iadaptha ezimbini ebendithetha ngazo. Kwiadaptha ye-iPad, enexesha elithe kratya kunaleyo yeMacBook, ubumdaka obuninzi buqokelelana kumalungu esithetha ngawo kwaye Ukuba uyabathanda ukuba bajongeke njengabatsha, kuya kufuneka ucoca rhoqo ezo ndawo.
Ngamafutshane, obunye ubungqina bokuba xa iApple isungula imveliso ihlalutya onke amalungu ayo ukuze ibe ngcono kunaleyo sele ikho. Kufanelekile ukukhumbula ukuba kungekudala u-Apple ngokwakhe wakhupha ingxelo apho waxela umngcipheko okhoyo xa usebenzisa iiadaptha ezingezizo ezokuqala kwiikhompyuter zakhe, emva kokuqhuma kwezixhobo ezithile kwamanye amazwe. Ngaba usebenzisa itshaja engeyoyokuqala?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » I-Apple kunye neenkcukacha zayo xa kugqitywa iimveliso
UApple uthetha ngeMacs, ezezimali, iMagSafe USB C, kunye nokunye. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac